In Abiy’s Ethiopia, Media freedom means to adore the regime like Jesus Christ. – Kichuu
HomeNewsAfricaIn Abiy’s Ethiopia, Media freedom means to adore the regime like Jesus Christ.
“Intarneeta cufuuf dirqamnee cufne,” jedhu hogganaan wiirtuu ijaarsa diimokiraasii Obbo Zaadig Abrahaa.
Rakkoo nageenyaa Itoophiyaa: ‘Uummanni nagayaafi tasgabbii nu gaafachaa jira’ – Zaadig Abrihaa
Qondaala olaanaa TPLF kan turaniifi achi keessaa bahuun dhaabicharratti qeeqa garagaraa dhiyeessuun kan beekaman Obboo Zaadig Abrihaa, turtii BBC waliin godhaniin ”Intarneetni meeshaa haasaa jibbiinsaa tahe, kanaaf cufuuf dirqamne,” jedhan.
(bbcnewsafaanoromoo)—Aabba Zaadig wayita ammaatti Paartii Badhaadhinaatti sadarkaa ministeerummaan hoogganaa Wiirtuu Ijaarsa Deemokraasii tahuun tajaajilaa jiru.
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee rakkoo nageenyaa Itoophiyaatti dhalaterratti turtii ‘BBC Focus on Africa’ waliin taasisaniin, ”dhaabbilee miidiyaa sabaafi amantii giddutti waldhabdeen akka uumamuuf gabaasaa turanirratti tarkaanfii fudhanneerra,” jedhan.
Gaazexeessaan BBC Piitar Okwoochee mootummaan keessan maaliif namoota ejjennoo siyaasaa isaaniin wal hin fakkaanne qaban hidha? jechuun gaaffii gaafateef:
”Mootummaan kana gochaa hin jiru. Inumaayyuu erga rifoormiin eegalee as, walitti dhufeenya mootummaa fi hawaasaa jijjiiraa jirra. Mootummaan humnasaa seeraan akka fayyadamuu danda’u goone,” jedhan.
”Olaantummaan seeraa cabaa tureera, kanaanis lubbuun hedduun badeera. Mootummaan ammoo kana to’achuudha qaba.
Uummanni nagayaafi tasgabbii nu gaafachaa jira. Nutis warreen seera biyyattii daddarban irratti tarkaanfii fudhachaa jirra.”
Ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa booda mormiifi hookkara dhalateen lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 239 gahuu poolisiin ibsee ture.
Akka qondaaltonni jedhanitti namoonni kunneen humnoota nageenyaafi walitti bu’iinsa namootaa gidduutti taasifameen kan lubbuu dhabanidha.
Kanarrattis humnoonni nageenyaa humna hangaa ol fayyadamu jedhurratti kan gaafataman qondaalli kun, ”humnoonni nageenyaa keenya bobbaasnu humni hangaa ol fayyadaman hinjiru.
Lubbuu poolisoota hedduus dhabneerra. Namoonni du’anis walitti bu’insa ajjeechaa Haacaaluun booda kaheeni. Waldhabdeen hawaasa gidduu tureera.
‘Wanti hunduu to’annoo jala jira’
Ajjeechaa Haacaaluun booda guyyoota lamaaf hokkorri turuus oggasuu to’achuu dandeenyeerra jedhu obbo Zaadig.
”Amma wanti hunduu Finfinnee fi Oromiyaatti tasgabbaa’eera,” jedhan.
Dabalataanis wanti kun uumamuu danda’a, sababni isaas ”Haacaaluun sagalee jijjiiramaa TPLF aangoorraa darbate ture. Namoonni akkasiin aariisaanii mul’isuun waanuma eegamudha.
Kunimmoo nuti haalicha to’achuu akka hin dandeenye hin agarsiisu,” jechuun tarkaanfii miidiyaaleerratti fudhatanis ni dubbatu.
”Dhaabbilee miidiyaa sabaafi amantii giddutti waldhabdeen akka uumamuuf gabaasaa turanirratti tarkaanfii fudhanneerra,” jedhan.
Hojiin mootummaas inni ijoon seerri akka kabajamu gochuudhas jedhan.
”Yeroo ammaa yoo barbaadde Finfinneettis tahe, naannoo Oromiyaatti akkuma barbaadde bilisaan socho’uu dandeessa,” jechuun gaazexeessaa BBC ka tahe Piitar Okwocheetti himan.
‘Walabummaan miidiyaa kan eegamedha’
Gaazexeessaan kun dabalee dhaabbilee miidiyaa cufuun mirga odeeffannoo daangeessuun kun aangoo amma irra jirtan- ijaarsa demookraasii kan faalleessudha gaaffii jedhuus gaafate.
”Akka hojiin keenya amma duraa qabatamaan agarsiisutti, hojiilee amma dura biyyattii keessatti takkaa hojjetamanii hin beekne hojjenneerra. Hidhamtoota siyaasaa hiikneerra.
Walabummaan miidiyaa biyyattii keessa kabaja qaba. Miidiyaaleenis haga seera kabajanitti hojjechuu danda’u.
Miidiyaaleen kunniin garuu saboota gidduutti hokkorri akka kahu godhan. Kun akka tahuf ammoo hin hayyamnu,” jechuun dabalataanis lubbuu uummataaf dursa kennina jedhan.
Sababuma gabaasa miidiyaaleen kunneen hojjetaniin lubbuun darbeeras jedhan.
Intarneeta – ‘Meeshaa haasaa jibbiinsaa’
Biyyattiitti erga tajaajilli intarneetaa addaan citee torban tokkoo ol taheera. Kanarrattis kan gaafataman qondaalli kun ”intarneetni meeshaa haasaa jibbiinsaa taheera,” jedhan.
”Jeequmsa sabaafi amantiin akka ka’u meeshaa taheera. Odeeffannoo bilisaa fi lubbuu uummata keenyaa gidduu filachuu qabna. Nutis lubbuu namaaf dursa kennine.
Kanumaafis intarneeta cufuuf dirqamne,” jedhan.
Dhimmoota kanneen to’achuu wayita dandeenyutti deebisnee bannas jedhan.
Gama kaaniin dhimma hidhaa miseensota Adda Bilisummaa Oromoo- ABO irratti kan gaafataman obbo Zaadig ”Seera kabachiisaa jirra. Miseensonni ABO seera daddarban jiru.
Qaama seera cabsu kamuu irratti tarkaanfii fudhanna,” jedhan.
Gaazexeessaan kun hokkoraafi rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti uumameef namoonni tokko tokko, muddama Itoophiyaafi Masrii gidduu yeroo ammaa jiru – Hidhaa laga Abbayyaarratti ijaaramu waliin walqabsiisu jechuun yaadni isaanii maal akka tahe gaafate.
Obbo Zaadigis dhimmichi dhimma qorannoorra jiru waan taheef dubbachuu akka hin feene ibsanii, ”Qaamoleen alaa kana keessaa harka akka qaban garuu mirkanadha,” jedhan.
Qaamoleen alaa isaan jedhan kun eenyu akka tahan gaafatamanis, bu’aa qorannoo eeguu wayya jedhaniiru.